Global Voices teny Malagasy » Fanangonan-tsonia Ho Famotsorana Ilay Lehilahy Eritreana Izay Nosamborina Tany Italia Noho Ny Mari-panondroana Diso · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Desambra 2017 14:14 GMT 1	 · Mpanoratra Bah Abdoulaye Nandika (en) i Annalisa Merelli, Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Andrefana, Italia, Sodàna, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Zon'olombelona
Ny fahatongavan'ilay voalaza fa mpanondrana olona an-tsokosoko tamin'ny volana Jona 2016. Sary tao amin'ny altreconomia.it .
Nilaza ity lehilahy iray 29 taona ity fa Medhanie Tesfamariam Behre no anarany ary efa herintaona sy tapany izy izay no niatrika fitsarana tao Palermo noho ny fanondranana olona an-tsokosoko. Resaka fahadisoana mikasika ny mari-panondroana diso no nahatonga ny raharaha, nosamborin'ny manampahefana izy satria noheverin'izy ireo ho Medhanie Yehdego Mered, izay antsoina hoe “Ilay Jeneraly”, ilay atidoha ao ambadiky ny fanondranana olona an-tsokosoko any Mediteranea nandritra ny taona vitsy lasa izay.
Nikaroka an'i Mered ny manampahefana Italiana hatramin'ny nitrangan'ny loza naharendrehan'ilay sambo Lampedusa tamin'ny 3 Oktobra 2013, izay nahafatesana olona miisa 368 ary 20 hafa raha kely indrindra no tsy hita popoka.
Voasambotry ny polisy Sodaney tamin'ny volana May 2016 tao amin'ny trano fisotroana kafe Asmara tao Khartoum, Sodana i Behre , taorian'ny fanadihadiana iraisam-pirenena naharitra izay nataon'ny sampam-pitsikilovana Italiana, Anglisy ary Sodaney. Nalefa tany Italia tamin'ny sidina manokana izy tamin'ny 7 Jona 2016.
Anisan'ireo mpanao gazety nanaraka ny raharaha i Stefano Colombo, mpanoratra  ao amin'ny thesubmarine.it. Tao amin'ny lahatsoratra navoakany tamin'ny 13 Novambra, dia nizara  ny zavatra hitan'i Lorenzo Tondo izy, mpanao gazety avy ao Palermo izay nanaraka ny raharaha ho an'ny The Guardian.
“Nanaraka ity raharaha ity aho nandritra ny herintaona sy tapany,” hoy izy “noheverina ho fisamborana ilay mpanondrana olona an-tsokosoko goavana indrindra, kanefa raha vao hitanay izy tao amin'ny seranam-piaramanidina dia fantatray fa tsy misy ifandraisany tamin'i Mered izany.”
Raha nihaza an'i Mered ny Tribonaly tao Palermo, ilay tena mpanondrana olona an-tsokosoko kosa nigadra tao Dubai noho ny pasipaoro sandoka. Manazava ny fahanginany tanteraka ao amin'ny media sosialy izany. “Noafahana izy tamin'ny volana Aogositra 2106,” hoy i Tondo nanamafy. I Berthe kosa mbola any am-ponja ary toa tsy hivoaka vetivety. Nanova mpitsara inefatra ny fitsarana. Araka ny lalàna Italiana, tsy maintsy manomboka hatramin'ny voalohany indray ny fitsarana isaky ny miova ny mpitsara .
Tamin'ny 4 Jolay, nanambara ny tranokalam-baovao newsicilia.it  fa nanolotra vavolombelona roa ny mpiaro, izay manana fialokalofana any Soeda ankehitriny, ary nanamafy sy nilaza fa tsy i Mered ilay lehilahy voasambotra .
Ankehitriny, misy vavolombelona roa vonona ny hijoro vavolombelona fa i Mered dia tsy ilay mpanao heloka bevava notadiavina nandritra ny roa taona mahery, fa ilay tovolahy atao hoe Mered Tesfamarian. Araka ny tatitra nataon'ny Guardian, i Ambesyer Yeman, 23 taona, mpitsoa-ponenana Eritreana tonga tany Italia niaraka tamin'ny fikambanana Meted tamin'ny taona 2013 no iray amin'ireo vavolombelona roa.
“Tsy fantatro ilay lehilahy nosamborina. Nahita ny sariny tao amin'ny Facebook aho ary nilaza avy hatrany hoe: ‘Tsy i Mered io’, hoy ilay tovolahy.
Fanampin'izany, nanambara tao amin'ny pejiny Facebook i Tondo fa nandrakitra  ny iray tamin'ny resaka nataony ny mpampanoa lalàna Italiana. Nahazo mpijery maro sy ekeko mihoatra ny 500 ny lahatsorany.
Nisy zavatra nampalahelo nitranga omaly. Zavatra iray nitranga tao Italia, tao anatin'ny sokajin'asako, izay heveriko ho “nôrmaly” mampidi-doza, afera tahaka ny mahazatra, hadisoana toy ny maro hafa. Nihaino ny sasany tamin'ireo resaka nifanaovako tamin'ny loharanom-baovao iray ny mpampanoa lalàna tao Palermo, tovolahy Eritreana iray izay nanampy ahy tamin'ny antsafa momba ilay raharaha “Mered,” ny hadisoana tamin'ny mari-panondroana momba ilay mpitsoa-ponenana nosamborina satria noheverina fa mpanondrana olombelona an-tsokosoko izy.
Mampanontany tena ny teknika fanadihadiana toy izany hoe tena mitady ilay tena meloka tokoa ve ny fitsarana Italiana sa manondro izay atao sorona fotsiny ihany mba hamaranana ny raharaha.
Mba hanaovana ezaka azo tsapain-tanana momba ity tantara ity, i Abdoulaye Bah, mpanoratra ity lahatsoratra ity, izay tohanan'ny vondrona mpikatroka , mpamaky sy manam-pahaizana maro, dia nanomboka fanangonan-tsonia ary mangataka anareo izahay mba hanao izany sonia izany:
Avotsory i Medhanie Tesfamariam Behre, mpandrafitra Eritreana any am-ponja noho ny mari-panondroana diso (fanangonan-tsonia ao amin'ny Aavaaz) 
Mangataka mba hamotsorana avy hatrany an'i Medhanie Tesfamariam Behre izahay ary mba hanaiky ampahibemaso ny fahadisoany miaraka amin'ny fialantsiny i Italia .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/28/111897/